у отечественных туристов издавна пользуется просто огромной популярностью. U-Sunny beach kusukela ezivakashi zasekhaya uye wajabulela ukuthandwa kakhulu. Le ndawo enkulu kunazo zonke eBulgaria inikeza abavakashile zonke "izinjabulo ezingu-33". I-Sunny Beach elula ingaba ngabathandi bebala elithulile nokuzilibazisa okusebenzayo. Yiqiniso, kulungile kule ndawo yokuhlaziywa kwakha ingqalasizinda. Ihhotela elihle, elihlinzeka ngamaholide abahlala endaweni ephansi kakhulu, kunezambiso eziningi. unny Beauty Palace 4*. Isibonelo, izivakashi zaseBulgaria zingakwazi ukubhuka igumbi elinethezekile ehhotela I-S Unny Beauty Palace 4 *.
Leli hotele elinezinkanyezi ezine engxenyeni esenyakatho ye-Sunny Beach resort. Ibanga ukusuka kulo kuya enkabeni yedolobhana liyi-1.5 km. Isikhumulo sezindiza samazwe aseBourgas sise-35 km ukusuka ehhotela. Ezimweni eziningi, izivakashi zifika ehhotela zisebenzisa ibhasi lokudlulisela olunikezwa opharetha othengisa ithikithi. Kodwa uma kunesidingo, ungakwazi ukufinyelela ehhotela ngetekisi noma ngebhasi. Ku-Sunny Beach kusukela esiteshini sezindiza ezokuthutha komphakathi kuya, njalo, njalo. Sunny Beauty Palace 4*. Yiqiniso, inikeza izivakashi zayo ukudluliselwa kanye nehhotela ngokwalo i- Sunny Beauty Palace 4 *.
Kutholakale leli hotele, ngeshwa, hhayi ogwini lokuqala. Ibanga ukusuka kulo kuze kufike ogwini lolwandle luyizingamitha eziyi-600. E-9 km ukusuka ehhotela kunesinye sezilwandle ezidume kakhulu eBulgaria - eCocoa Beach.
Iyini ihhotela: incazelo ejwayelekile
S unny Beauty Palace 4* в одном четырехэтажном комфортабельном корпусе. Ihhotela le- S Unny Beauty Palace 4 * lithatha izivakashi endlini eyodwa yezakhiwo ezinezintambo. Isakhiwo sehhotela, ngokusho kwezivakashi eziningi, asikona nje izakhiwo ezinhle, kodwa futhi nesakhiwo esihle kakhulu. Leli hotela lakhiwe kungekudala - ngo-2014. Futhi-ke, ifenisha, izindlu zasendlini kanye nokuhlobisa lapha cishe kusha.
тойка регистрации в Sunny Beauty Palace 4* работает круглосуточно, что, безусловно, очень удобно для постояльцев. Idesksi yokubhalisa e- Sunny Beauty Palace 4 * isebenza nxazonke, okuyinto elula kakhulu izivakashi. Lapho ukwamukela izivakashi ngokuvamile uhlangana nomnikazi wehhotela. Lo wesifazane, ngokombono wamaholide, unesizotha futhi unomusa kakhulu. Phakathi kwezinye izinto, uyakwazi nokukhuluma isiRashiya. Empeleni abhalisiwe ngokwabo bayazi, ngeshwa, isiNgisi kuphela. Kodwa imishwana eyisisekelo yama-receptionist aseRussia namanje iyaqonda. Ukubhema nokuhlala nezilwane ezifuywayo ehhotela akuvunyelwe.
Iningi lezivakashi libheka amahle hhayi ihhotela kuphela, kodwa nensimu yalo. Igceke lehhotela ligcwele amathrekhi emigwaqweni, okuyinto elula kakhulu ukuhamba, futhi iluhlaza kakhulu.
Sunny Beauty Palace 4* (Sunny Beach) пре длагает своим постояльцам 62 комфортабельных номера. Kuphelele, i- Sunny Beauty Palace 4 * (i-Sunny Beach) inikeza izivakashi zayo amakamelo angu-62 akhululekile. Uma ngabe ufisa, le hotele ingaqashwa njengezinga elijwayelekile, namafulethi. Amakamelo angaba nemibhede emibili noma engashadile. Ngakho-ke, ngenduduzo yokuchitha isikhathi ehhotela kungaba njengabavakashi abaza eBulgaria nomndeni wabo, futhi nabangani noma osebenza nabo.
Phakathi kwezinye izinto, ihhotela linamakamelo ajwayelekile angu-5 aklanyelwe abantu abakhubazekile. La makamelo afakwe ngendlela yokuthi abakhubazekile bazizwe bekhululekile lapha.
Ngaphezu kwemibhede namatafula ombhede, wonke amakamelo afakwe:
. Ekamelweni ngalinye elinikezwe ehotela kukhona nekhishi elincane lapho ungadla khona futhi ulungiselele ama-toast . Yiqiniso, kunamakamelo kuleli hotela lezinkanyezi ezintathu kanye nezikhukhula. Lapha abavakashi bangasebenzisa hhayi kuphela izindlu zangasese zamahhala, kodwa futhi nesomisi yezinto ze-beach.
Ithelevishini kuleli hotele yi-satellite. Ukuze uthole imali, izivakashi zingaqasha ingane yokubheka ehhotela. Ihhotela lithole ukubuyekezwa okuhle kwezivakashi, kuhlanganise nokutholakala kwamafriji amakhulu emakamelweni, lapho ungagcina khona imikhiqizo ethengwe ezitolo ze-Sunny Beach.
Izitezi emakamelweni ehhotela zingasetshenziswa ngamatayela noma emakethe. Indawo yendawo yokuhlala ikhulu kakhulu (izinga - 30 m 2 , izindlu zokuhlala - 45-50 m 2 ). Sunny Beauty и ба лконы. Kukhona amakamelo ehhotela Sunny Beauty kanye namabhaloni . I-loggias kule hotela, ikwahlulela ngezibuyekezo zabavakashi, nayo ivulekile futhi ikhululekile.
I-Sunny Beauty Palace 4 * (Bulgaria): izivakashi izibuyekezo mayelana namakamelo
Sunny Beauty Palace сложилось по-большей мере неплохое. Umbono wezivakashi mayelana namakamelo ehhotela i- Sunny Beauty Palace yayingalungile kakhulu. Izivakashi zicabangela umhlobiso wamakamelo kuleli hotele elihle kakhulu. Imishini yasendlini kanye nezinyawo emakamelweni ehhotela isebenza kahle, futhi ifenisha ibonakala iyakhaka futhi ifanelekile. Dumisani abahambi namapayipi kuleli hotele. Izitsha zokudoba, izindwangu zokushisa nezitsha zokugeza ziyizinto ezintsha futhi zikhululekile. Ukubuyekezwa okuhle kakhulu kufanelwe ihhotela kanye nokuba khona kwebhuku lokugeza.
Sunny Beauty Palace 4* (Болгария) , к с ожалению, достаточно редко. Amakamelo ahlanzekile ehhotela I- Sunny Beauty Palace 4 * (Bulgaria) , ngeshwa, akuvamile. Lokhu, okuyiqiniso, kungathiwa yi-minuses yehhotela. Ngisho ngisho nabadobi abavame ukuphoqeleka ukuba benze ngokwabo. Ibhande lebhedi kuleli hotela, Yebo, ngezikhathi ezithile ushintsho. Kodwa futhi kaningi kakhulu (kuphela kanye kuphela ezinsukwini ezingu-8-10). Akuyona into enhle kakhulu, ngokusho kwezivakashi eziningi, ezihlobene nemisebenzi yazo kuleli hotele kanye namantombazane ngokwabo. Ngisho nasezifundeni zabo ezingavamile emakamelweni asula uthuli futhi ugeze phansi kwesisebenzi sehhotela, njengoba abaningi bezokuvakasha bebheka, kubi.
Yiqiniso, le hotele inikeza izivakashi zayo nezinhlobonhlobo zezinsiza zamahhala futhi empeleni ensimini ngokwayo. Isibonelo, izakhamuzi zingasebenzisa ngokukhululekile leli chibi. Kukhona futhi isikhungo sempilo ehhotela. Lapha, uma ufuna, ungenza massage (ngenkokhelo yehhotela), vakashela i-hammam yaseTurkey noma i-sauna. Kukhona ehhotela, yebo, kanye nokugeza okubanzi kwe-Jacuzzi.
Sunny Beauty Palace 4* (Болгария, Sunny Beach ) предоставляются и такие удобства, как: Phakathi kwezinye izinto, izivakashi ze- Sunny Beauty Palace 4 * (iBulgaria, Sunny Beach ) zinikezwa izinto ezinjengokuthi:
Ukuhlanza nokuhlanza okomile;
Ukupaka mahhala okungasetshenziswa;
I-iron ne-ironing ibhodi ngokucela.
E-lobby yehhotela, izakhamuzi zingajabulela i-Wi-Fi mahhala. Ezinganeni kukhona indawo encane yokudlala ehhotela.
Sunny Beauty Palace 4 *: ukubuyekezwa mayelana nengqalasizinda yehhotela
Sunny Beauty от носительно удобным и для проживания подходящим. Iningi lezivakashi ezikhethile i-Sunny Beach njengendawo yazo yokuvakasha zibheke nge- Sunny Beauty Hotel ukuze zikhululeke futhi zifanele ukuhlala. Ngakho-ke, isibonelo, izivakashi eziningi zediza lehhotela zidunyiswa kakhulu. Ubukhulu nokujula kwalo kukhulu kakhulu. Ngakho-ke, ukubhukuda kuyo kukhululekile futhi kumnandi. Ama-sun loungers azungeze ahlelwe okuningi futhi azibambe ngokuphelele kuzo zonke izivakashi. Esigodini, phakathi kwezinye izinto, ingxenye encane yezingane ezincane nayo igodliwe.
Ingqalasizinda, ngokusho kwabakhamuzi, kuleli hotele akukubi. Dumisani abasebenzi behhotela kanye nabasebenzi behhotela. Nakuba lezi zinduna zingaphathi imisebenzi yazo, zihlala zihlonipha izivakashi. Okufanayo kuya kwabanye abasebenzi basehhotela. Into ewukuthi, ezinye izivakashi zinezikhalazo mayelana nokubonakala kwabasebenzi behhotela. Bafika bezosebenza izingubo zabo. Phakathi naleso sikhathi, abasebenzi abaningi behhotela elihle kakhulu, ngokusho kwabaningi bamaholide, babezobukeka ngendlela efanayo. Yebo, kanye nabaqashi ngokwabo ngalesi simo bekuzocaca ukuthi ngubani ohlala ehhotela.
Uma ufuna, ungakwazi ukuqasha amakamelo ku-Sunny Beauty Hotel ngebhulakufesi noma ngisho nebhodi eligcwele. Ukudla ehhotela, ngeshwa, akudunyiswa yizo zonke izivakashi. Uma abaqashi ehhotela bebancane, izingxenye ezibhekene ne-buffet yendawo ngokuvamile zikhulu. Njengoba ukwanda kwenani lezivakashi, ziqala ukwehlisa kancane kancane. Imenyu ekamelweni lokudlela lehhotela, ngokusho kwezivakashi eziningi, alifani kakhulu. Futhi izitsha ngokwabo, ngeshwa, kwezinye izimo zingaba yi-stale.
Igumbi lokudlela ehhotela likhona ohlelweni "lwe-buffet". Uma ngabe ufisa, izivakashi zingathatha ukudla kwasekuseni, isibonelo, ama-omelettes, ama-marmite, amaqanda aqhambukayo, ukhukhamba, utamatisi, amafishi. Ngaphandle kwezikhathi zokuphumula, izidlo kanye nama-dinners, le hotele iphinde isebenze ukudla okusabalalisa ntambama. Lokhu, yiqiniso, izakhamuzi eziningi ziba nomthelela ekuhlanganiseni kwayo okungenalutho.
Sunny Beauty Palace 4* (Солнечный берег) нахо дится примерно в 10 минутах ходьбы спокойным шагом. Ulwandle olusuka e- Sunny Beauty Palace 4 * ehotela (Sunny Beach) cishe imizuzu engu-10 uhamba ngezinyawo. Izivakashi zivakashela lezi zinkimbinkimbi ngokuvamile ibhishi lomasipala wendawo. Ukuzilibazisa, kubhekwa njengento elula. Ugu lwale ndawo lugcwele isihlabathi esithambile, futhi ukungena kolwandle kunomusa kakhulu. Hlanza leli qhwa kaningi, ngakho-ke libukeka lihlanzekile ngokuphelele.
Eqinisweni ulwandle ngokwalo kule ndawo luvame ukuzola, futhi amanzi kuwo ashisa. Uma befisa, izivakashi zingaqasha kuleli lolwandle i-chaise longue kanye nesambulela. Okufanele le sevisi akubizi kakhulu.
Ezinye zezivakashi zivakashela indawo yokubhuka yaseSunny Beach nelwandle oludumile lwaseCocoa Beach. Itholakala engxenyeni eseningizimu yedolobhana futhi ibizwa ngokuthi ihloniphe iqembu elisebenza ensimini yalo ukuhlela amaqembu. Ikakhulukazi, lolu lolwandle luthandwa kakhulu nabantu abasha. Izivakashi ezincane ziyakuthanda ukuhlangana lapha kusihlwa. Ngenxa yokuthi kukhona abantu abaningi eCocoa Beach, amanani okudla okusheshayo, asebenza ogwini, ngokuvamile avame kakhulu.
Costa Brava Blanes 2 * (Spain / Costa Brava): izithombe kanye nokubuyekeza
Emahhotela aphambili e Hurghada "5 izinkanyezi". Holiday Hurghada. amahhotela Kuhle
Yini lomshado Decor kuyoba imfashini 2017?